हिमाल खबरपत्रिका | धराप बनेका निजी स्कूल
- रामेश्वर बोहरा, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
लाखौं बालबालिका धराप जस्ता विद्यालय भवनमा बसेर अध्ययन गरिरहेका छन्। भूकम्प वा आगलागी जस्ता विपत्तिामा निम्तिन सक्ने उच्च मानवीय क्षतिको यो जोखिम भने कसैको वास्तामा परेको छैन।
काठमाडौं, नयाँबानेश्वरको लाखेचौर मार्गको दुवैतर्फ स्कूल भवन मात्रै देखिन्छन् । १४ वर्षअघि स्थापित चेल्सी इन्टरनेशनल एकेडेमीद्वारा सञ्चालित ‘विद्या संस्कार स्कूल’ का भवन हुन्, यी । विद्यालयको प्रशासन शाखामा कार्यरत सृष्टि शाक्यका अनुसार, १,४५० विद्यार्थी पढ्ने यो स्कूलका १२ वटा भवन छन्– सबै भाडाका ।
२०३७ सालमा स्थापित सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरको उषा बालबाटिका सेकेन्डरी स्कूल भाडाको भवनमा छ । वीरेन्द्रनगर–६, बुद्धपथस्थित पद्मादेवी कार्कीले करीब ४० वर्षअघि बनाएको यो भवन जीर्ण र अध्ययनरत करीब ८०० विद्यार्थीका लागि साँघुरो पनि छ । शिक्षक मधु जिसी भन्छिन्, “घर जीर्ण छ, सडकछेउमै भएकाले विद्यार्थी आवतजावतमा समेत समस्या छ ।”
बुटवल उपमहानगरपालिका–११, कालिकानगरको एउटा पुरानो र जीर्ण भवनमा चलेको छ, निजी विद्यालय लुम्बिनी शिक्षालय । ३५० भन्दा बढी विद्यार्थी स्थानीय व्यवसायी मधुसूदनलाल श्रेष्ठले २०४२ सालतिर बनाएको भाडाको यो भवनबाहेक माटोले बनेका र टिनले छाएका सात वटा पुराना टहरामा पढ्छन् । पुरानो भवनको बाहिरी भागमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि थप संरचना निर्माण भइरहेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका–६ स्थित गोदावरी इङ्गलिस सेकेन्डरी स्कूलमा कक्षा १ देखि १० सम्म ४७३ जना विद्यार्थी पढ्छन् । २०४८ सालदेखि सञ्चालित यो स्कूल राधा रायमाझीले आवासीय प्रयोजनका लागि बनाएको घरमा छ । प्रधानाध्यापक महेशकुमार झा भन्छन्, “घरधनी विदेश हुनुहुन्छ, भाडा उहाँको ब्याङ्क खातामा जम्मा गरिदिन्छौं ।”
तस्वीरहरूः बिक्रम राई
धरापमा स्कूलः ललितपुरको भोलढोकास्थित शान्ति विद्याश्रम सेकेण्डरी स्कूल ।
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पपछि तीन वर्ष नौ महीना बितिसके । धेरैको सम्झ्नामा त्यो कहालीलाग्दो घटना मधुरो बनिसकेको छ । भग्नावशेष बनेका दूरदराज गाउँमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनिरहेका छन् । क्षतिग्रस्त सरकारी विद्यालयका भवनलाई नयाँ र बलिया भवनबाट प्रतिस्थापित गर्ने काम चलिरहेको छ । के २०७२ सालको भूकम्पबाट पाठ सिकेर विद्यालयहरूलाई सुरक्षित पार्न थालिएको हो ? माथि उल्लिखित उदाहरणले भने यथार्थ झ्न् भयावह देखाउँछन् ।
विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था नजिकबाट नियालेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, काठमाडौंका तथ्यांक अधिकृत/विद्यालय निरीक्षक रामहरि थापाको अनुभवमा अवस्था झ्न् डरलाग्दो छ । “काठमाडौंका ८० प्रतिशत निजी विद्यालयको आफ्नो भवन छैन, अधिकांश भाडाका घरहरू सुरक्षित छैनन्” थापा भन्छन्, “सरकारी/सामुदायिक विद्यालयका चाहिं ५० प्रतिशत भवनलाई सुरक्षित बनाउन सकिने सम्भावना रहेछ, तर त्यसको पहल भएको देखिएन ।”
साँघुरा गल्लीभित्र भाडाको भवनमा सञ्चालित काठमाडौंका प्रि–प्राइमरी स्कूल
शिक्षा विभाग (हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र) का अनुसार, देशभर प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरी ३५ हजार ६०१ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये सरकारी विद्यालय २७ हजार ९१४, निजी/संस्थागत विद्यालय ६ हजार ५६६ र धार्मिक विद्यालय (मदरसा, गुम्बालगायत) १,१२१ छन् ।
निजी विद्यालयहरूका दुई वटा संगठन छन्– प्याब्सन र ‘नेशनल प्याब्सन’ । तीमध्ये झ्ण्डै दुईतिहाइ विद्यालय आवद्ध प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेलाई सोध्यौं– निजी विद्यालयका भवन कस्ता छन् ?
तर यी विद्यालयको आफ्नै भवन हुन् वा भाडाको– सञ्चालकदेखि अभिभावकले समेत खासै महŒव दिएको देखिन्न । कतिपयले यसलाई खेलमैदान, खुला ठाउँलगायतका पूर्वाधारसँग मात्र जोडेर हेर्छन् । विद्यालय भवनसँग स–साना बालबालिकाको जीउज्यानकै सवाल जोडिएको कुरा बेवास्तामा पर्छ ।
बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिकास्थित ४०० विद्यार्थी पढ्ने हातेमालो बोर्डिङ स्कूलको कक्षाकोठा ।
२०७२ सालको भूकम्पमा भत्केको गोंगबु, काठमाडौंस्थित दीपज्योति बोर्डिङ स्कूलको भवन ।
डा. सुवालका भनाइमा आवासीय भवनहरूको इन्जिनियरिङ डिजाइन फरक हुन्छ । सामान्यतया केही परिवार बस्न मिल्ने डिजाइन गरिने हुँदा तिनले धान्ने भार पनि सीमित हुन्छ । त्यसखाले घरका एउटै कोठामा ४०–४५ जना विद्यार्थी र उनीहरू बस्ने डेस्क–बेञ्चको भारसमेत थपिंदा असुरक्षित हुन पुग्छ । अझ् भूकम्पमा वा अरू कुनै आपत्विपत्मा एउटा कोठाभित्रका ४०–४५ जना बालबालिका एकैसाथ साँघुरो भ¥याङबाट भागदौड गरेर निस्कनु पर्दा के होला ?
२०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा गठित ‘एकीकृत योजनाबद्ध शहरी विकासको मापदण्ड तर्जुमा कार्यदल’ ले बुझएको प्रतिवेदन (२०७२) मा उल्लेख छ– “भवन जुन प्रयोजनको लागि स्वीकृति लिइएको हो, घरधनीले स्वीकृति लिएको बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न चाहेमा कारण खुलाई नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । जस्तो, आवासीय प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिइएको भवनको उपयोग संस्थागत (स्कूल, कलेज, हस्पिटल वा व्यापारिक÷व्यावसायिक आदि) प्रयोजनका लागि गर्न सकिने छैन । भवनको प्रयोजन परिवर्तन गर्नु परेमा भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता विपरीत नहुने गरी नगरपालिकाहरूबाट स्वीकृति लिएर मात्र गर्न दिइनेछ ।”
सरकारी पनि उस्तैः भवनबाहेक टेक्ने ठाउँसम्म नभएको काठमाडौंको गणबहालस्थित नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयको पाँचतले भवन ।
एउटा प्रयोजनका लागि बनाइएको भवन अर्कै प्रयोजनमा लगाइएको भन्दै त्यसलाई रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाले भूकम्पपछि ‘भवन निर्माण प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७३’ जारी गर्‍यो । कार्यविधिमा उल्लेख छ– “महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिई निर्माण भएका कतिपय भवनहरू व्यक्तिको नाममा स्वीकृत भए पनि किनबेच वा अन्य कारणबाट संस्था, कम्पनी आदिको नाममा हक हस्तान्तरण भएको पाइएकोले जुन प्रयोजनको लागि स्वीकृति दिइएको हो, सोही प्रयोजनमा उपयोग हुने गरी वा संस्थागत मापदण्डमा भवन संरचना परिवर्तन गरेपश्चात मात्र नामसारी गर्ने ।”
महानगरपालिकाले स्वीकृत प्रयोजनको उद्देश्य उल्लंघन गरेका भवनहरूलाई यो मापदण्ड पालना गर्न पटक–पटक सूचित गर्‍यो । तर, पालना भएन ।
अर्को, आवासीय भवनहरूमा ‘फायरस्केप भर्‍याङ’ हुँदैन । बढी भीडभाड हुने विद्यालयलगायतका ठाउँमा यस्तो भर्‍याङ अत्यावश्यक मानिन्छ । अनुमान गरौं, विद्यालयमा आगलागी हुँदा कौसीबाट हाम्फाल्नुपर्‍यो भने स–साना बालबालिकाको अवस्था कस्तो होला ?
विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिने र नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायहरूले नै कस्तो भवनमा विद्यालय सञ्चालन हुँदैछ/भइरहेको छ भन्ने हेक्का राखेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयको ‘संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९’ को परिच्छेद ३ को भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ– “संस्थागत विद्यालयको भवन आफ्नै स्वामित्वमा भएको वा कम्तीमा पाँच वर्षको भाडा सम्झैता भएको हुनुपर्नेछ ।” २०७२ सालको भूकम्पपछि मन्त्रालयद्वारा जारी ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ मा समेत यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ– “विद्यालयको आफ्नो जग्गा र घर वा कम्तीमा पाँच वर्षको घर भाडाका लागि विधिवत् सम्झैता भएको हुनुपर्ने ।”
नियामक निकायहरू यही व्यवस्थालाई अघि सारेर ‘केही गर्न नसकिने’ तर्क गर्छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, काठमाडौंका प्रमुख नन्दलाल पौडेल भन्छन्, “पाँच वर्षलाई घर भाडामा लिएको सम्झैतापत्र पेश गरेमा नयाँ विद्यालयलाई अनुमति दिने व्यवस्था विद्यालय सञ्चालकको हितमा छ, यसले विद्यार्थीको हित र सुरक्षा हेरेको छैन ।”
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र­का अनुसार देशभरका प्राथमिक विद्यालय (१–५ कक्षा) मा ३९ लाख ७० हजार विद्यार्थी पढ्छन् । निम्न माध्यमिक तह (६–८ कक्षा) का १८ लाख ६६ हजार विद्यार्थी समेत जोड्दा आधारभूत तह भनिने १–८ कक्षामा कुल ५८ लाख ३६ हजार विद्यार्थी पढिरहेका छन् । यीमध्ये ४८ लाख ५६ हजार विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा छन् ।
सरकारी विद्यालय भवनको अवस्था चाहिं कस्तो छ ? “हिजो आश्रम, गुरुकुलहरूबाटै शिक्षाको शुरूआत भयो, समुदायको दानदातव्यबाटै विद्यालय खुल्न शुरू गरेका हुन्” शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र­का प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, “समुदायले बनाएका त्यस्ता विद्यालय भवन सामान्यतया नन् इन्जिनियर्ड नै हुन्छन् ।”
शर्माको भनाइले अधिकांश सरकारी विद्यालयका भवन इन्जिनियरिङ डिजाइन बेगर बनेको देखाउँछ । धेरै ठाउँमा कच्ची गारो भएका भवनमै विद्यालय चलिरहेका छन् । कतिपय विद्यालयमा सरकारले दुईकोठे पक्की भवन बनाइदिए पनि ती पर्याप्त छैनन् । शर्माका भनाइमा, शिक्षकको तलब र पाठ्यक्रमको जिम्मा लिए पनि भवनको जिम्मा अझ्ैसम्म सरकारले लिइसकेको छैन, स्थानीय सरकार र दातृसंस्थाहरूले भवन बनाउन सहयोग गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त छैन ।
विद्यालय भवन सुरक्षित भए/नभएको हेर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूबाट यही वर्ष स्थानीय तह (सरकार) मा हस्तान्तरण गरिएको छ । तर, सुरक्षाको सवाल उस्तै छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार २०७२ सालको भूकम्प शनिबार नभई अरू कुनै बार गएको भए जुन क्षति हुनसक्थ्यो, अवस्था अहिले पनि उही छ । उनी भन्छन्, “भूकम्प नै जानु पर्दैन, आगलागी वा अरू केही कारणले भागदौड मच्चियो भने विद्यालय भवनहरूले नै ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छन् ।”